Maxkamad ku taalla Maraykanka oo xukun ku riday Soomaali lala xiriirinayo Ganacsiga Qaadka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxkamad ku taalla Maraykanka oo xukun ku riday Soomaali lala xiriirinayo Ganacsiga Qaadka
Maxkamadda Magaalladda Rojester ee dalka Maraykanka ayaa xukun min labo sanno ah ku riday labo qof oo Somaali Maraykan ah, kuwaasi oo lagu soo oogay inay ka mid yihiin Hawlwadeennadda Shabakad Caalami oo Qaadka u kala gudbiya Maraykanka iyo Europe.
Ahmed Aadan iyo Bayaan Yuusuf oo deggan magaalladda Rojester ee duleedka magaalladda New York ayaa beeniyey Eedeymaha lagu soo oogay.
Hadal ka soo baxay Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee dalka Maraykanka, Erik Shinderman ayaa lagu xusay inay Eedeysanayaashaasi yihiin Madaxda Shabakad isku xiran oo si kontorobaan uga ganacsata Qaadka oo mamnuuc ka ah dalka Maraykanka.
Maxkamadda ayaa la hor keenay Qoraal ka kooban 88-bog iyo Caddaymo Codod oo ay soo gudbiyeen Saraakiisha Waaxda Sirdoonka ee Boliska magaalladda New York
Sidoo kale, Maxkamadda magaalladda Rojester waxaa la soo taagay Eedeysane kale oo lagu magacaabo Yadeta Berki oo haysta Dhalashadda dalka Britain, kaasi oo la idalalka Britain, Holland, Beljim iyo Shiinaha.
Eedeysanaha ayaa lagu soo oogay inuu dhowr tan oo Qaad ah u soo diri jirey Axmed Aadan iyo Bayaan Yuusuf, tan iyo bishii October ee sannadkii 2013-kii.
Eedeysanaha ayaa beeniyey dembiga lagu soo oogay, waxaana la filayaa in lagu xukumo xabsi saddex sanno iyo ganaax dhan 150-kun oo Dollar.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horreysay oo ay Maxkamad ku taalla Gobalka New York xukunno ku ridaan dadka ka ganacsada Qaadka.
Dalka Maraykanka waxaa qaadka laga mamnuucay sannadkii 1993-kii.
Dhageyso:Barnaamijka dooda Dalsan ,27-03-2015
Dhageyso:warka Duhurnimo ee Radio Dalsan ,27-03-2015